Google Inotangisa Fuchsia OS Webhusaiti yeVagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Kusvika nguva pfupi yadarika, isu taiziva zvishoma nezve Google's Fuchsia inoshanda sisitimu. Yakatanga kuoneka paGitHub muna2016 pasina chiziviso chepamutemo, dzidziso dzakakurumidza kubuda nezve zvazvingave.
Zvino mazuva mashoma apfuura nhau dzakaburitswa kuti Google yanga yatanga webhusaiti yeprojekiti neruzivo nezve iyo Fuchsia inoshanda sisitimu iyo yave iri mukuvandudzika kwenguva yakati wandei mukati mekambani.
Saiti iyi ine sarudzo yemapepa aripo uye zvinongedzo kune zvinyorwa zvinyorwa zvezvinhu zvinoshanda sisitimu, kusanganisira Zircon microkernel.
Zvinyorwa inovhara Fuchsia kuvandudza uye kunyorera kweanoshanda system, Inogadzira iyo sisitimu kubva kune yekodhi kodhi, iyo rondedzero yezvakakosha zvinhu uye maficha.
1 Uye pasina kwese Google inosarudza kuunza Fuchsia kujekesa
2 Nezve Fuchsia
Uye pasina kwese Google inosarudza kuunza Fuchsia kujekesa
Mushure menguva dzinoverengeka dzekuvandudzwa kwemukati muchirongwa cheFuchsia, uko kwaive kwakavanzika chakavanzika, nekuti vagadziri veGoogle havana kutaura chero chinhu nezvazvo uye vachiramba kuvapo kwayo, Google yakaita sarudzo yekuburitsa chirongwa ichi.
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti pasi peiyo Fuchsia chirongwa, chirongwa chepasirese chekushandisa chiri kuvandudzwa chinogona kushanda pane chero rudzi rwechigadzirwa, kubva kumabasa ekushandira uye nharembozha kusvika kune zvakadzamidzirwa uye zvigadzirwa zvemutengi.
Iko kuvandudza kunoitwa uchifunga nezve chiitiko chekugadzira iyo Android chikuva uye uchifunga nezve zvikanganiso mumunda wekusagadzikana uye chengetedzo.
Fuchsia yakagadzira yayo yega Armadillo GUI yakanyorwa muDart uchishandisa iyo Flutter fomati.
Iyo purojekiti urikugadzirawo iyo Peridot UI fomati, Fargo package maneja, yakajairwa libc raibhurari, iyo Escher yekupa system, iyo Magma Vulkan mutyairi, inoyevedza composite maneja, MinFS, MemFS, ThinFS (FAT in Go mutauro), uye Blobfs, pamwe neiyo FVM Zvikamu maneja.
Kuti uve nechokwadi chekuenderana kweLinux mu fuchsia, raibhurari yeMachina yakakurudzirwa, Iyo inokutendera iwe kumhanyisa Linux zvishandiso mune yakasarudzika yakasarudzika chaiyo muchina wakagadzirwa nekushandisa hypervisor-based Zircon kernel uye Virtio maratidziro, nekufananidza nenzira yakarongeka yekumisikidza Linux-kunyorera paChannel OS.
Kune chengetedzo, yepamusoro sandbox yekuzviparadzanisa system inokurudzirwa, umo maitirwo matsva asina mukana wekuwana zvinhu zvekernel, haigone kugovera ndangariro, uye haigone kuita kodhi, uye namespace system inoshandiswa inoisa mvumo iripo yekuwana zviwanikwa.
Kune rimwe divi nenzvimbo nyowani yeprojekti, yakafumurwa kuti vagadziri veFuchsia OS vari kushanda pamabasa ekugadzirisa matambudziko akasiyana siyana, uko zvinoenderana nezvayo Fuchsia inopa maviri macores, pamwe neakawanda akateedzana.
Iyo Garnet dura inoitwa pamusoro peZircon uye inoitisa madhiraivha edhizaivhi
Iyo topaz rukoko inopa interface yekugadzira plug-ins.
- LK inopa yakakosha masisitimu ane mashoma RAM saizi uye yakaderera processor kuita, ayo anowanzo shandiswa mumatanho akabatanidzwa. Iyo LK kernel yakavakirwa pane diki kernel chirongwa uye inogona kutarisirwa seyakavhurika imwe nzira kune masisitimu akaita saFreeRTOS uye ThreadX.
Zircon iyo yakazara-inoratidzirwa microkernel iyo inotarisa pane zvinoshandiswa pamidziyo ine masimba masimba, zvakadai semafoni efoni uye makombiyuta ega.
Iyo Zircon musimboti yakagadzirirwa semubatsiri kune LK pamwe nekumisikidzwa kwemamwezve mazano.
Somuenzaniso, Zircon ine rutsigiro rwemaitiro, asi LK haina, asi kumisikidzwa kwemaitiro muZircon kunosanganisira zvinhu zveLK kushanda nendangariro uye tambo. Zircon zvakare inotsigira isipo yeLK kugona, senge mushandisi chikamu, chinhu chinobata system, uye kugona-kwakavakirwa chengetedzo modhi.
Kana iwe uchida kuziva iyo webhusaiti webhusaiti, unogona kuzviita nekubata kune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inotangisa Fuchsia OS webhusaiti yevagadziri
KaOS 2019.07 ikozvino yave kuwanikwa, ine Plasma 5.16.2 uye Linux 5.1.15